Tsiniya (Zinnia) - गर्मी र शरद ऋतु मा flowerbeds र उद्यान मा blooming सुन्दर बोट। यो सबै दुनिया भर माली हुर्किसकेका, तर अमेरिका मा सबै भन्दा साधारण tsiniya छ। यी फूल को लोकप्रियता यसको प्रजातिहरू को विविधता योगदान। बस लाग्छ: zinnias विभिन्न रंग हुन सक्छ! साथै, बोट नै धेरै ध्यान आवश्यक छैन। बढ्दै zinnias, रोपण र मायालु यसलाई कुनै पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्न असम्भाव्य छ लागि। यो पहिलो चिसो सम्म लगातार blooms।
सबै भन्दा साधारण प्रतिनिधि tsiniya जो एक मीटर गर्न बढ्छ hairs संग सीधा स्टेम छ, सुरुचिपूर्ण छ, बास्केट रूपमा तीव्र पात र inflorescences छ। Inflorescence, आफ्नो आकार र रंग किसिम फरक।
Tsiniyu बढ्न र कसरी बिरुवाहरु हेरचाह गर्न?
यसलाई पहिले नै unpretentiousness zinnias बारेमा भने गरिएको छ: रोपण र बोट हेरविचार डाटा धेरै सरल छ। यसलाई अवैतनिक माली पनि बढ्न सक्छ। तपाईं के गर्न आवश्यक सबै - यो समय देखि सामा देखि माटो र यो तान्नु loosen समय छ। साथै, फूल खडेरी र गर्मी गर्न प्रतिरोधी छ, त्यसैले यसलाई बढ्न सक्छ र दक्षिण। प्रकाश र गर्मी जस्तै zinnias हुनाले यसलाई कुनै पनि घाम स्थान मा बिरूवा राम्रो छ। कृपया याद गर्नुहोस् कि अवतरण साइट मस्यौदा थिएन मा छ। आफ्नो आँखा प्रसन्न गर्न फूल zinnias, रोपण र हेरविचार राम्रो माटो मल समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं बोट दुर्लभ, तर एकदम प्रशस्त छ पानी आवश्यक त पानी stagnate हुँदैन। टीन जब तिनीहरूले Rot सक्छ रूपमा, फूल मा पानी प्राप्त गर्न अनुमति गर्न सकिन्छ। विशेषज्ञहरु पनि tsiniyu मल (रोपण पछि र फूल तन्तु को गठन को समयमा एक महिना) खुवाउन सल्लाह। को inflorescence हराउँछ, यो ध्यान फूल अवधि लम्ब्याउनु गर्न कटौती हुनुपर्छ।
रोपण र हेरविचार पनि बिरुवाहरु को प्रजनन समावेश छ। Zinnia बीचमा वा लेट वसन्त मा जमीन मा सिधै छरिएको छन् बीउ द्वारा प्रचारित छ। त्यो चिसो मन गर्दैन देखि, यो गिरावट मा रोपेर छैन भन्दा राम्रो छ। अवतरण प्रक्रिया नै लामो लिन छैन: बीउ एक खोक्रो गहिराई मा भूमि सम्मिलित छन्। पहिलो मार एक हप्ता भित्र देखा पर्छ। मौसम अवस्था अनुकूल हुनेछ भने, tsiniya चाँडै बढ्न र विकास हुनेछ।
यो बोट को खेती को अर्को तरिका - बिरुवा मार्फत बढ्दै। रोपेको वसन्त को बीचमा बाहिर छ। लागि स्थायी बिरुवा सामान्यतया प्रारम्भिक गर्मी, रोपिन्छ जब रात frosts छोडिन्छ।
के रोग र किरा विषय tsiniya गर्न?
रोपण र हेरविचार, तिनीहरूले सही र अनुसार सिफारिसहरू सबै संग बाहिर छन् पनि भने, किनभने बोट किरा वा रोग गर्न क्षति को अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन। कहिलेकाहीं zinnias देखिन सक्छ powdery फफूंदी (यो चिसो वा भिजेको मौसम समयमा हावा फ्लो को उल्लंघन को परिणाम हो)। लागि जाँदा tsiniyu मा किरा लाईकीराको र slugs कहिलेकाहीं आक्रमण। यो फूल र मई beetles, संकलित जो हुनुपर्छ र नष्ट प्रेम।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, लगभग जो कोहीले tsiniya भनिने बोट रोपेर गर्न सक्नुहुन्छ। रोपण र हेरविचार (फोटो प्रमाणित गर्न), तर प्रयास र ऊर्जा धेरै आवश्यकता छैन, इच्छित परिणाम माली द्वारा पारित आफ्नो, तर पनि मान्छे मात्र होइन प्रसन्न गर्ने ल्याउन।
बैंगनी sunkissed गुलाब: वर्णन, मर्मतसम्भार, गुणन
गाजर: एक तरकारी लागि रोपण र मायालु
स्याउको रूख च्याम्पियन: विविधता को विवरण। स्याउ च्याम्पियन विशेषताहरु
Phlox। खेती र हेरविचार बढ्दो सिजन भर
समीक्षाहरू: सदमे लहर थेरेपी। संकेत र विनाशकारी। सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ?
Incendiary ब्राजील नृत्य
महिला र उपचार मा cholecystitis लक्षण। महिला दीर्घकालीन cholecystitis: लक्षण र उपचार, आहार। पुरानो cholecystitis को Exacerbation
रेस्टुरेन्ट "क्रिस्टल महल", Tver: समीक्षा, वर्णन, मेनू र समीक्षा
लामखुट्टे जाल संग पाल - प्रकृति मा एक शान्त छुट्टी
इन्टरनेट विज्ञापन एक कार बेच्न मदत गर्नेछ
औषधि "Bifosin": प्रयोग, संरचना, वर्णन, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन